Riipbiliikii Dimookiraatawaa Koongootti Iboolaan dhalate, Dhaabbatni Fayyaa Addunyaan marii hatattamaa irra jira - BBC News Afaan Oromoo
Riipbiliikii Dimookiraatawaa Koongootti Iboolaan dhalate, Dhaabbatni Fayyaa Addunyaan marii hatattamaa irra jira
18 Caamsa 2018
Goodayyaa suuraa Riipbiliik Demokitaatawaa Koongootti namoonni Iboolaan qabamuu shakkaman hospitaala adda bahetti yaalamaa jiru.
Dhaabbati Fayyaa Addunyaa balaa Iboolaa Riipbiliik Dimookiraatawaa Koongootti babal'achaa jiru irratti marii hatattamaa gochuufi.
Mariii kanarratti labsiin fayyaa yeroo muddamaa irratti xiyyeefatu fi dhimmicha irratti tarkaanfii fudhatu ni murteefama
Hanga ammaatti namooti 44 qabamuufi 23 du'uun qoratamaa jira.
Namooti baayyeen baadiyyaa jiraatan kan qabaman yoo tahu magaala Mabaandaakaatti namini tokko qabamuun mirkanaa'era.
Dhukkubichi magaala wiirtuu geejibaa naannoo laga Koongoo jirtuufi namoonni miiliyoona tokko tahan kessa jiraatanitti mul'ate gara magaala guddoo biyyatti Kinshaasaatti akka hin babal'anneef sodaatamaa jira.
Magaalaa Mabaandaakaa keessatti mul'achuunsaa maaliif yaaddesse?
Akka qondaalli gameessa Dhaabbata Fayyaa Addunyaa jedhanitti Maabaandaakaatti mula'achuun baayyinaan tamsa'uu waan agarsiisuufi.
"Waanti haaraa jiru, magaalattiitti mul'chuu isaafi kan isa baadiyyaa irraa adda tahuusaati
Goodayyaa suuraa Giraafiksii BBC
Dhaabbata Fayyaa Addunyaatti daayireektera itti aanaa tarkaanfii hatattamaa kan tahan Salaamaa, Mabaandaaakaan naannoo laga Koongootti argamuunshee dhukkubicha gara Koongoo-Biraazaavilii fi gara magaalaa Kinshaasaa uummata miliyoona 10 qabdutti carraa tamsa'uusaa dabaleera.
''Kunimmoo dhalachuu dhukkubichaa irratti xiyyeefannoo akka kenninuufi gara Mabaandaakaa hatattamaan deemnee mallattoo dhukkubichaa jalqaba mul'ate otoo hin tamsa'iin dhaabuu qabna.''
Dhukkubichi bara 2014-16 tti Afrikaa dhihaatti mul'tee, Giinii, Seeraali'ooniifi Laayibeeriyaatti namoota ajjeesee ture.
Tatamsa'ina Iboolaa qolachuuf maal hojjetamaa jira?
Akka Dhaabbati Fayyaa Addunyaa jedhutti dhibeewwan Iboolaa qorannoo jala jiran keessaa 3 adda ba'anii beekamaniiru, 20 kan dhugoomuu danda'uu fi 21 ammoo shakkiin kan jiraniidha.
Koongoo naannoo Ikkuweetar jedhamuttidha kan argaman. Magaalaa guddoon naannawa kanaa Mbandaka jedhama.
Obbo Salaamaan akka jedhanitti hojiiwwan adda baasuu fi wantoota tokko tokko qindeessuu eegalaniiru, magaalaa Mbandaka keessatti.
Akka inni jedhutti dhibeen kun gara magaalaa kanaa kan dhufe namoota sirna awwaalaa warra iboolaadhaan du'anii kibba magaalattiitti awwaalamanii irratti hirmaataniidha.
Goodayyaa suuraa Danaa tatamsa'ina Iboolaa agarsiisu, Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti
Dhaabbati Fayyaa Addunyaa hojjettoonni fayyaa namoota 430 kanneen warra dhibaniin tuttuqqii qaban adda baasaniiru jedha. Ammallee namoota tuttuuqqii qaban hanga 4000 Kaaba Lixa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti adda baasuuf hojjechaa jiraachuus beeksiseera. Irra jireessi namoota kanneenii baadiyyaa fagoo keessa jiru jedhan Obbo Salaamaan.